Ridid Bhokisi rekumaka Machine Vagadziri & Vatengesi - China Rigid Bhokisi Ekumaka Machine Fekitori
Kadhibhodhi yekucheka muchina
Inonyanya kushandiswa kucheka nekucheka makadhibhokisi, grey bhodhi, nezvimwewo Icho chishandiso chakakodzera chegwaro rakaomarara remabhuku uye epamusoro giredhi mabhokisi ezvipo.
Kumanikidza waini bubble muchina
168 senes kumanikidza waini bubble muchina zvinoenderana neinodiwa nemutengi ndiko kuvandudzwa kwemidziyo mitsva yekuumba bepa rechipo bhokisi, pamusoro pemhepo matubvu, kuunyana, kukanganisa, negoridhe nesiribhodhi kadhibhodhi, yakakosha mapepa ekunamatira mhedzisiro haina kunaka, bronzing bepa pamusoro kukwenya uye nezvimwe nyaya nhanho yekumisikidza.
Yehunyanzvi waini bhokisi, chipo bhokisi, tii bhokisi mhando, uye akateedzana e grey makadhibhodhi ekupakata maficha.
Dhizaini yemuchina uyu inoverengeka, compact, yakachengeteka, yakasimba uye yakapfava kuitisa.
Chimiro chekuputira muchina 211 zvinoenderana nezvinodiwa pamusika ndiko kukura kwechigadzirwa chitsva, humburumbira-wepamusoro, wo Chuan PLC Taiwan wemview inobata skrini yekuona, kudzora kweparamende.
Semi-otomatiki rakaomarara bhokisi rekumaka muchina ne robot
Muchina wechipo bhokisi, kurongedza bhokisi, akagadzirwa nemaoko mabhokisi ekugadzira gungano mutsetse michina, inoraswa inoziva kupeta kuumba, iyo yakapetwa nzeve, kubviswa kwemafuro uye kuumbwa uye kupeta uye kuenderera kwekuita, kunogona kuchengetedza yakawanda nguva uye yekugadzira, zvinobudirira kugadzirisa kugadzirwa goho riri kugadzira chigadzirwa chesarudzo chekugadzira kurongedza bhokisi rebhizinesi.
Double musoro otomatiki bubble muchina
Inogona kuve yakasanganiswa zvakakwana ne otomatiki universal bhokisi bhokisi uye semi-otomatiki gungano mutsara.
Mazuva ano indasitiri yekupakata indasitiri, kuitira kuti ivandudze makwikwi emakwikwi uye kuunzwa kwemichina yekushandisa yave nzira huru mukuvandudza mabhizinesi mukambani yekupakata.
Muchina wechipo bhokisi, kurongedza bhokisi, akagadzirwa nemaoko mabhokisi ekugadzira gungano mutsetse michina, inoraswa inoziva kupeta kuumba, iyo yakapetwa nzeve, kubviswa kwemafuro uye kuumbwa uye kupeta uye kuenderera kwekuita, kunogona kuchengetedza lol yenguva uye yekugadzira, zvinobudirira kugadzirisa kugadzirwa goho riri kugadzira chigadzirwa chesarudzo chekugadzira kurongedza bhokisi rebhizinesi.
Otomatiki gluing muchina
N-650A (850A) Aulomatic feeder gluing muchina nebasa re otomatiki feed mapepa uye gluing, ine otomatiki tembiricha conlroller uye 24- maawa limer.
Rigid bhokisi kuputira muchina
238 dzakateerana otomatiki kumucheto bubble kudhinda ndeye yedu yekutanga kambani kukura uye kugadzirwa kwenyika nyowani yekuvhara bhokisi kugadzira michina, yechizvarwa chechipiri, iyo yese muchina chiito uye chitarisiko optimization, saizi bhokisi mhando inogona kuiswa kune yakafararira renji.